PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-10 - Ababoshiwe baphuthelwe umngcwabo kaChillies
Ababoshiwe baphuthelwe umngcwabo kaChillies
KUBOSHWE amadoda amahlanu eMlaza kungcwatshwa obeyisigebengu esaziwayo aphinde abengumgibeli wezithuthu uMnuz Sandile “Chillies” Bhengu.
La madoda awuzwe ngendaba umngcwabo kaChillies obubhekwe ngabomvu kusukela ngeledlule.
Amathathu kuthiwa aboshwe ngosuku lomlindelo ngoLwesihlanu ngemuva kokuzama ukushayisa iphoyisa ebeliwavimba ngesikhathi eshaya isidudla kwa-V eMlaza.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe abasolwa babhadle esitokisini bayoze bavele enkantolo kusasa.
“Amadoda amathathu aboshwe ngoLwesihlanu ngesikhathi ezama ukushaya isidudla ngakwa-V. Elinye lamaphoyisa lizamile ukubamisa kodwa bavele bashaya imoto yaqonda ngqo kulo. Ngenhlanhla likwazile ukuvika, amaphoyisa akwazi ukubavimba abasolwa ababopha,” kusho uColonel Mbhele.
Uthe babhekene namacala amathathu: elokuzama ukubulala, elokushayela budedengu nelokutholakala nensangu emotweni.
Uthe izolo ngosuku lo mngcwabo amaphoyisa abengahleki nakancane njengoba abevimba zonke izimoto ezisesha.
“Kusayiwa emngcwabeni kuboshwe amadoda amabili abezenza abantu bomthetho efake nenyufomu ekhombisa ukuthi banezikhundla ezithile. Oyedwa ubefake eyamaphoyisa omgwaqo abakwa-RTI, omunye efake eyamasosha asemanzini iSA Navy. Amaphoyisa abe esebaphosa imibuzo, bavele bankwankwaza okwenze ukuthi bagcine sebevalelwe. Babekwe icala lokuzenza abantu abangebona,” kusho uColonel Mbhele.
Uthe sekuphunywa emathuneni aseWentworth, amaphoyisa amise imoto emhlophe iHyundai ebihamba abasolwa ngokuba ngonogada bezigebengu.
“Amaphoyisa ashaqe izibhamu ezintathu, esisodwa esikhulu nezimbili ezincane. Okwamanje labo nogada ababili abekade behamba namantombazane basaphoswa imibuzo ngamaphoyisa aseWentworth,” kusho uColonel Mbhele.
Uthe amaphoyisa aqhubekile nokunkanisa eMlaza ngemuva komngcwabo, egade izidubedube ezingasuka uma sekwenziwa i-after tears.
Uthe nangeSonto (namhlanje) bazobe beqaphile ukuqinisekisa ukuthi isimo sibuyela kwesejwayelekile eMlaza.
“Angeke sizwe ngezigebengu, zizitshele ukuthi zizosiphatha. Umsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi abantu baseMlaza baphephile. Ithina okumele sisho uma kuzovalwa umgwaqo hhayi bona,” kuphetha uColonel Mbhele.
ABATHWALISE kanzima amaphoyisa, abantu abekade behambele umngcwabo wesigebengu saseMlaza uSandile “Chillies” Bhengu izolo Isithombe: SIBUSISO NDLOVU